Hababka Argagaxa leh ee Uu Dadka u Dilo Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee “Kim Jong-un” (Muuqaal) - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
Hababka Argagaxa leh ee Uu Dadka u Dilo Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee “Kim Jong-un” (Muuqaal)
Nidaamka ka jira Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu adeegsadaa ciqaab kala duwan oo cidna aan caqligeeda ku soo dhacayn, waa marka uu goosto inuu ciqaabo shaqsiyaad mucaarad ku ah nidaamkiisa ama farta lagu tuhmo inaan si dhammeystiran u taageersaneyn hoggaamiyaha kaliya ee waddanka Kiim Joong Uun.
Sida ay sheegtay jariidada “Mirror” ee dalka Ingiriiska, janaraal ka tirsan ciidanka oo aan magaciisa la sheegin, ayaa xilli dhaweyd waxaa lagu dilay waddo shabbahada mid lagu soo bandhigay filmi uu hadda ka hor jilay James Bon.
Jaraanlkan oo lagu tuhmay inuu waday inqilaab milatari ayaa waxaa lagu riday barkad uu ka buuxo kalluunka halista ee albiiraanaa ee dad cunka ah, kaas oo ilkihiisa kaga caano maalay janaraalka.
Ciqaabtii la marsiiyey kuma aaney koobneyn intaa, inta aan kalluunka loo tuurin waxaa laga jaray gacmaha iyo xubno kale oo jirkiisa ka mid ah, si aanuu isku dhaqdhaqaajin marka uu kalluunku hilibkiisa kala goosanayo.
Khabiirka arrimaha Asia, Jon Himinigis, ayaa waxa uu arkaa in nimaadka digtaatooriga ah ay u fakaraan in hababka ay dadka u dilaan ay tahay layli muhiim ah si ay gacan bir ah ugu qabtaan xukunkooda dadka ka soo horjeeda.
Sanadkii 2017, ayaa mas’uul Kuuriyada Waqooyi ka baxsaday oo la yiraahdo Hii Hiyon Liim, uu xilli ku khasbanaaday inuu ka qeybgalo dil lagu filinayey 11 fanaan ah oo lagu dilayay suug iyo hubka diyaaradaha lagula dagaallamo.
Shaqsigan goobjoogga ah waxa uu sheegay in fanaaniinta ay ku eedyasnaayeen iney ka qeybgaleen filmi anshax darro ah.
April-tii hore, ayaa wakaaladda Wararka ee Japan ay soo xigatay in 4 mas’uul xabbad lagu dilay, kadib markii uu fashilmay shirkii hoggaamiyaha Kiim iyo madaxweyne Trump. mas’uuliyiintan ayaa lagu eedeeyay iney macluumaad muhiim ah u gudbiyeen dhanka Mareykanka, arrintaas oo keentay inuu shirku fashilmay, shirkaas oo Kiim Joon Uun uu ka filayey in looga fududeyn doono cunaqabteynta xooggan ee in muddo ahba dalkiisa saarneyd.
Hababka uu dadka u dilo waaxaa ka mid ah inuu u tuuro ey gaajeysan, dhanka eedada Kiim, waxey wax ku dishaa suntan, kadib markii ay dhaliishay habka uu wax u dilo wiilka ay eedada u tahay.
Si kastaba, waddanka dunida inteeda kale ka go’doonsan, siyaabaha ugu dhibka badan ee dadka loo dilo waxaa ka mid ah in qofkii oo nool la gubo oo dab lagu shido.